Fihetsiketsehana an-dalambe – MyDago.com aime Madagascar
Omeo alalana ireo misakana an-dRavalomanana
Nivatravatra fihavy ny mpirarika ny Les As, Voninahitsy Jean Eugene fa tsy tokony hiverina eto mihitsy Ravalomanana, sady notondroiny ho olona kanosa sy saro-tahotra ity mpamorona ny TIM ity. Be loatra ny zavatra tsy nety sy mifanohitra amin’ny lalàna velona nataon’ity filoham-pirenena taloha ity ka mendrika azy ny hizaka ny vokatr’izany.
Tsara ny hevitra saingy ny tanjak’izany hevitra izany eo amin’ny tontolon’ny olompirenena rehetra mihitsy no tsy hay refesina. Azo inoana tokoa fa misy fikambanana politika marobe manohitra mafy ny fodian-dRavalomanana an-tanindrazana. Fotoana indrindra izao hampisehoany izany heriny izany satria efa nampiseho ihany koa ny miaramila sy ny zandary ary ny polisim-pirenana fa « mpanakorontana » Ravalomanana ka sakanana amin’ny fomba rehetra.
Manaja ny demokrasia sy ny fahafahana
Tsy misy hahasakana izao fitondrana izao tsy hampiseho eo anatrehan’izao tontolo izao fa tany tan-dalàna sy fatra-panaja ny demokrasia no misy eto. Vonona hampandray anjara ny olom-pirenena rehetra ho amin’ny fandraisan’andraikitra sy ho fanomanana ny fifidianana. Fotoana izao mba hampisehoan’ireo mpanao politka efa zatra lapa nandritra izay roa taona mahery izay mba hisedra ny fidinana eny an-dalambe. Mety hitratrevatreva ihany koa mantsy ny sehatra iraisam-pirenena ka hilaza fa fanamparam-pahefan’olo-tokana sy didiko fe lehibe fotsiny no antony hanakanana an-dRavalomanana tsy hody an-tanindrazana sy hiverina eo amin’ny sehatra politika.
Antoko politika marobe
Nony nahazo toky tamin’ireto « tafika malagasy » ny mpanao politika dia niseho tamin’ny heviny avokoa ary nameso ny sehatry ny haino aman-jery daholo. Ka ho teraka indray ve ato ho ato ny vondrona politka « mpanakana » an-dRavalomanana ? Efa maro izy ireo ka anisan’ireny ny UDR-Fanovana sy ny antoko mpiara-dia aminy rehetra, ny antoko Otrik’afo, les As, ny TGV, ny Masters ny AREMA, ny HPM,ny MDM ny TIM (ilay mitafy double-face),,, Aoka tsy ho sakanana ny fanehoan’ireny antoko ireny ny heviny satria fomba mba hampiverina indray ny fahatokisan’ny sehatra iraisam-pirenena izany, ary koa hisorohana ny sazy izay mety hihatra amintsika mianakavy eto. Ny mpomba an-dRavalomanana kosa dia mifitsaka tsara, toy ny mahazatra ihany, ao anaty fefy ihany sao manelingelina ny « hetsika ».
Ravalomanana Marc, Tsy ny antoko T.I.M. no mpanohana azy
Auteur Ony RambeloPublié le 17 juin 2011 17 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
1 réflexion sur « Fihetsiketsehana an-dalambe »
Mba asaivo manao rodobe mankeny Ambohijatovo fotsiny hoe ireo milaza ho mpanakana an’i R8 tsy hody ireoo? Dia ho hita eo hoe firy na firy ny isany!… Fa raha mahazo 1.000 izy ireo dia manome vola an’izay sahy mifaninana amiko aho!
Tena marina e! Eny ambony latabatra mivazavaza ery, kanefa ny hery tsy misy fa kataho-boalavo (oadray, azafady!) kataho-bitro fotsiny!
Ry Pierrot avy no mba nieritreretina ho manam-pahaizana, kay lasa « sans qualité » koa! TTTTSSSSSSSSSSS!
Précédent Article précédent : Minisi-panjakan’ny Fahefana Avo Rakotoarisoa Yves Aimé : Tokony hametra-pialàna avy hatrany
Suivant Article suivant : L’exclusion, source de déstabilisation politique !